Ndiri Kutadza Kubvisa Pfungwa Dzangu Pazvinhu Zvine Chokuita Nebonde | Vari Kuyaruka
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndau Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Urhobo Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Sarudza zvakanaka vanhu vokutamba navo. Kana shamwari dzako nevaunodzidza navo vakatanga kutaura nyaya dzebonde, iwe ukapindira munyaya dzavo zvichakuomera kuti pfungwa dzako dzibve panyaya dzebonde. Kazhinji, unogona kutsvaka nzira yokuti musaramba muchitaura nezvazvo asi uchizviita nenzira yokuti vamwe havazokuoni semutsvene votanga kukushora.
Ungada here kuti kombiyuta yako irohwe nevirus? Kana usingadi sei uchifanira kupinza zvinhu zvounzenza mupfungwa dzako?
Usazvivaraidza nezvinhu zvakafumuka. Zvinhu zvakawanda zvinovaraidza zviri kugadzirwa mazuva ano zvinoita kuti munhu ade bonde zvisina mwero. Bhaibheri rinoti chii? “ Ngatizvichenesei pazvinhu zvose zvinosvibisa nyama nomudzimu, tichikwanisa utsvene pakutya Mwari. ” (2 VaKorinde 7:1) Tambira kure nevaraidzo inoita kuti ude zvebonde.
Yeuka izvi: Hazvina kuipa kuti munhu anzwe achida kurara nemumwe munhu. Mwari ndiye akasika murume nemukadzi kuti vanzwe vachidanana zvisingaiti, uye kuti vanhu vanofanira kuita bonde ndevanenge vakaroorana chete. Saka kana ukatanga kuva nechido chakasimba chokurara nemumwe munhu, usafunga kuti uri munhu akaipa kana kuti hauna tsika dzakachena.
Chinhu chinokosha: Unogona kusarudza zvaunoda kuti zvigare mupfungwa dzako. Zviri kwauri kuti usarudze kuva nemafungiro akanaka uye kuva netsika dzakachena!